Ugoloza ukudlala umdlali ongenele isiteleka | News24
Ugoloza ukudlala umdlali ongenele isiteleka
Cape Town – Umgadli weLeicester City, uLeonardo Ulloa, usengenele isiteleka kanti usefunge wagomela ukuthi angeke esaphinde adlalele leli qembu ngemuva kokuthi egxeke umqeqeshi, uClaudio Ranieri, ngokumdayisa.
Embhalweni awufake enkundleni yezokuxhumana, iTwitter, u-Ulloa ubhale ukuthi: “Ngizizwa ngidayisiwe uRanieri futhi ngenzelwa phansi yikilabhu. Angeke ngiphinde ngibadlalele...”
Lo mgadli wase-Argentina, osaqale imidlalo emibili kule sizini, washaya igoli elilodwa, ufake isicelo sokushiya kuleli qembu ngesonto eledlule ngaphambi kokuba iqembu laseSpain, i-Alaves, libeke etafuleni isizumbulu semali engu-£1.7 million yokuthenga lo mdlali kodwa lachithwa yizikhulu zeLeicester.
OLUNYE UDABA: Umdlali uthi uyazisola ngokujoyina iChiefs
ISunderland izimisele ngokusayina lo mgadli yize noma iLeicester ithi angeke ize idayisele iqembu eliyizimbangi. IGalatasaray nayo ifuna ukusayina lo mdlali ngokwesivumelwano sokubolekisa.
U-Ulloa, nobenganeme neze, utshele iSky Sports: “Ngibuhlungu kakhulu ngalesi simo.
“Ngibe neminyaka emibili emihle ekilabhini kodwa manje, ngokwesimo sami – ngingadlali futhi ngingeyona ingxenye yezinhlelo zeqembu – ngikholwa ukuthi indlela engcono kubhekwe phambili ukuthi ngishiye futhi ngingajabula kwenye indawo.
“Umqeqeshi ubelokhu engitshela ezinyangeni ezintathu ezedlule kanye nasemasontweni amabili edlule ukuthi uma kufika isiphakamiso esilinganiselwa ku-£4-5m ekilabhini, uzongisiza ngishiye.
“Ukuqonda kwami ukuthi zikhona iziphakamiso ezigijima kulelo nani noma ngisho nangaphezulu kwalokho ezingabukwa.
“Ngemuva kwento uRanieri ebelokhu engitshela yona amasonto, namhlanje ungitshela ukuthi ufuna ukuthi ngihlale,” kuqhuba lo mdlali ethi akazi ukuthi kungani bengafuni ukumdedela ukuze azidlalele kwelinye iqembu.